Tontolo iasan'ny Desktop hafa tsy tohanan'ny DEBIAN 10 | Avy amin'ny Linux
Tontolo iasan'ny Desktop hafa tsy tohanan'ny DEBIAN 10 amin'ny fomba ofisialy
Araka ny efa fantatsika rehetra, ny DEBIAN 10 fizarana meta, dia iray amin'ireo tranainy indrindra, mafy orina sy marin-toerana amin'ny totalin'ny sy ankehitriny Rafitra miasa malalaka sy malalaka misy, ary izy io dia manohana ny malaza sy be pitsiny indrindra Tontolo Desktop (DE) fantatra.
Andeha ho tadidintsika fa a Tontolo iainana Desktop, dia tsy inona fa ny andiana rindrambaiko ilaina hanolorana ny mpampiasa rehetra ny iray Operating System, endrika fifandraisana, sariaka ary ahazoana aina ny fifandraisana. Izany hoe, fampiharana ny Interface ho an'ny mpampiasa sary (GUI) vonona hanome fidirana sy fametrahana mora, toy ny baraovola sy fampidirana anelanelan'ny fampiharana, miaraka amina fampiasa toy ny drag and drop, ankoatry ny maro hafa.
Amin'ny tranga ankehitriny DEBIAN GNU / Linux-fizarana meta, ao anatin'ny vao haingana indrindra Malagasy Bible, la laharana 10, anarana kaody Buster, manohana amin'ny fomba ofisialy ny fametrahana sy ny fampiasana ireto manaraka ireto Tontolon'ny Desktop: GNOME, KDE Plasma, XFCE, kanelina, VADIKO, LXDE y LXQT.
Araka ny aseho mazava, amin'ny sary eo ambonin'ity andalana ity, amin'ny alàlan'ny fampiasana ilay fampiharana Torohevitra (Selector na mpanelanelana amin'ny lahasa). Izay tsy inona fa ny fonosana manome interface tsotra ho an'ireo mpampiasa te-hikirakira ny rafitr'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanatanterahana asa manokana iray na maromaro. Ity programa ity dia azo ampiasaina mandritra ny fametrahana dingana na amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fampiasana na tsia, ny masontsivana fanombohana sasany.
1 Sehatra Desktop hafa
Sehatra Desktop hafa
Anisan'ireo Sehatra Desktop hafa tsy tohanan'ny fomba ofisialy DEBIANINA 10, izany hoe, tsy tantanan'i Tasksel, azontsika atao ny manonona ireto manaraka ireto:
Deepin Desktop Environment na DDE Is a Tontolo iainana Desktop noforonina ho tompon-tany na tsy misy an'ilay Distro sinoa tsara tarehy, manavao ary miasa, Deepin. Tamin'ny voalohany dia novolavolaina niaraka tamin'ny tranomboky GTK, izay navela hanolotra fampiasa an'ny Akorandriaka gnome momba izany. Avy eo ampidiriko ny tranomboky Qt5 fa tsy mandika HTML5.
Ary amin'izao fotoana izao, naverina nosoratan'i DTK (Fitaovana Deepin Tool Kit) ho an'ny famolavolana interface sy ny fifandraisana amin'ny System, amin'ny ankapobeny. Lavitra, DDE misy ivon-toerana fanamafisana izay mampivondrona ny fikirakirana ny rafitra, ny fisehoany, ny fanavaozana ary ny safidy GRUB rafitra manokana. Antenaina fa azo apetraka izy io DEBIANINA 10, rehefa navoaka ilay kinova Deepin 20, izay hiorina amin'ity. Hahafantatra bebe kokoa momba ny voalaza Tontolo iainana Desktop azonao atao ny mitsidika ny tranonkalany ofisialy amin'ny: DDE.
Pantheon Is a Tontolo iainana Desktop noforonina ho tompon-tany na tsy misy an'ilay Amerika Avaratra haingana, maimaimpoana ary azo antoka antsoina hoe Distro, Elementary OS. Izy io dia miavaka amin'ny maha maivana sy maodely azy, ankoatry ny fanoratana avy amin'ny rangotra amin'ny fiteny vala ary miaraka amin'ny sy toolkit GTK3.
Miorina amin'ny GNOME fa mampiasa akorany manokana izy. Izay mahatonga azy io ho maivana kokoa ary kely kokoa noho io iray io ary miray mora kokoa amin'ireo rindranasa hafa an'ny Elementary OS como el hazo fisaka (dock), Epiphany (ny tranonkala) Scratch (mpamoaka lahatsoratra tsotra) na Birdie (Mpanjifa Twitter). Ampiasao ho mpitantana varavarankely koa Gala, izay miorina amin'ny reny.
Antenaina fa hapetraka amin'ny DEBIANINA 10, amin'ny fomba milamina, avy amin'ny kinova ankehitriny 5.X (Juno), mifanaraka amin'ny DEBIANINA 10, hatramin'ny kinova taloha 4.X (Loki) Azo napetraka tamim-piatoana tamin'ny DEBIANINA 9. Hahafantatra bebe kokoa momba ny voalaza Tontolo iainana Desktop azonao atao ny mitsidika ny tranonkalany ofisialy amin'ny: Pantheon.
Desktop Budgie Is a Tontolo iainana Desktop noforonina ho tompon-tany na misy ny tsotra, mahaleo tena ary mora ampiasaina, Distro irlandey miantso, Solus. Ankoatr'izay dia miavaka amin'ny maha-izy azy maoderina, matanjaka, haingana, tsiranoka ary azo ovaina.
Tamin'ny voalohany dia nitovy ny fijeriny GNOME 2 ary / na VADIKO, na dia mety hampiditra singa an'ny Whisker y kanelina. Izany dia satria, miorina eo amboniny Gnome 3 fa mampiasa torolàlana vitsivitsy avy amin'ny Gnome 2. Androany, feno antsipiriany izy io ary manana fanohanana amin'ny haitao farany.
Amin'izao fotoana izao, ny fisehoany amin'ny kinova farany an'ny Solus mampatsiahy ny interface ny Windows 10. Ambonin'ny zava-drehetra, amin'ny lafiny bara ambany toy ny faritra fampandrenesana. Mariho fa mpampiasa sasany an'i Windows Manomboka mitondra fiara izy ireo GNU / Linux, mety hanome lanja azy ireo tokoa izy ireo.
Amin'ireo 3, Tontolon'ny Desktop naneho hevitra, ity no mora apetraka DEBIANINA 10, hatramin'ny fonosana (budgie-desktop, budgie- *) izy ireo dia ao amin'ny tahiry repositories mitovy. Hahafantatra bebe kokoa momba ny voalaza Tontolo iainana Desktop azonao atao ny mitsidika ny tranonkalany ofisialy amin'ny: Budgie.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny «Entornos de Escritorios» alternatives tsy tohanan'ny fomba ofisialy «DEBIAN 10», ny sasany izay azo ampiharina amin'izao fotoana izao ary ny sasany kosa tsy, fa azo antoka fa tsy ho ela dia tena liana sy mahasoa ho an'ny rehetra. «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Tontolo iasan'ny Desktop hafa tsy tohanan'ny DEBIAN 10
Alejandro Garcia sary placeholder dia hoy izy:
Ry namako, tsy nahatratra ny Trinity ianao kinova novaina an'ny kde3 miaraka amin'ny qt3 izay efa mandray ny dingana mba ho Tontolo iainana Desktop tsy miankina amin'ny kde miaraka amin'ireo libs programany manokana.
Valiny tamin'i Alejandro Garcia
Miarahaba anao Alejandro! Tsy fantatro izy, tsy ho ela dia manantena aho fa hanoratra lahatsoratra manonona azy. Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra sy ny vaovao.
DOSBox: Ahoana ny fampiasana ny fiteny fandaharana DOS amin'ny GNU / Linux?